July 12, 2020 - Alinnpya
အမျိုးမျိုးနှိပ်စက် ခဲ့တဲ့ အဖေကြောင့် ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းတွေကို ပြောပြပြီး မိသားစု အတွင်းရေး များကိုပါ ရင်ဖွင့်ခဲ့တဲ့ “ဇေရဲထက်”
July 12, 2020 AlinnPya Comments Off on အမျိုးမျိုးနှိပ်စက် ခဲ့တဲ့ အဖေကြောင့် ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းတွေကို ပြောပြပြီး မိသားစု အတွင်းရေး များကိုပါ ရင်ဖွင့်ခဲ့တဲ့ “ဇေရဲထက်”
မင်းသားချော ဇေရဲထက်ကတော့ အောင်မြင်မှုတွေရရှိ ပိုင်ဆိုင်လာတာနဲ့အမျှ သူ့ရဲ့ မိသားစုတွေအပေါ် တော်တော်လေး ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပေးသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ မနေ့က ဇူလိုင်လ (၁၁) ရက်နေ့မှာတော့ ဟန်ငြိမ်းဦးအကောင့်ပိုင်ရှင်တင်ခဲ့တဲ့ ဇေရဲထက်ရဲ့ အဖေ ဘက်ကအဖွားက တော်တော်လေး ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုတာနဲ့ ပက်သတ်ပြီး ဇေရဲထက်က ပရိသတ်တွေရဲ့ အထင်အမြင်လွဲခြင်းကို ခံနေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကိစ္စနဲ့ ပက်သတ်ပြီး ဇေရဲထက်က အခုလိုပဲပြော ထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ”ကျွန်တော်ကို မူကြိုကအစ (၁၀)တန်း ထိအဘွား အမေ့ဘက်ကအဘွားလက်ပေါမှာကြီးပြင်းခဲ့သလို […]
သင့်မွေးရက်က ပြောတဲ့ သင့်ဖူးစာရှင် သင့်ချစ်သူအကြောင်း
July 12, 2020 AlinnPya Comments Off on သင့်မွေးရက်က ပြောတဲ့ သင့်ဖူးစာရှင် သင့်ချစ်သူအကြောင်း
သင်ဟာ…1ရက်နေ့ မွေးသူ ဖြစ်ရင်.. သင့် ချစ်သူ ဟာ တတ်တတ်ကြွကြွရှိမယ် ဖြတ်ထိုးဉာဏ် အလွန်ကောင်းပြီး လူတဖက်သားကို ကူညီတတ်မဲ့သူတျောက်ဖြစ််တယ်။သင့်အတွက်ဆို လိုချင်တာဖြည့်စည်းပေးမယ့် သူဌေးကြီးတျောက်လိုပါပဲ… 2ရက်နေ ့မွေးသူ ဖြစ်ရင်… သင့် ချစ်သူ ဟာ ကြင်နာယုယတတ််တယ်။ သင့်ကိုအမြဲဂရုစိုက်တတ်ပြီး အနုပညာနဲ့ပတ်သက်ရင် ပါရမီပါသူတျောက်ဖြစ််တယ်။သင့်အတွက်ဆိုမမေ့နိုင်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုဒွေ ဖန်တီးပေးမယ့်သူတျောက်ပါပဲ။ 3ရက်နေ့မွေးသူဖြစ်ရင်… သင့်ချစ်သူဟာ စိတ်လိုက်မာန်ပါလုပ်တတ််တယ်။ ဆရာကြီး လုပ်ရမှာကျေနပ်ပြီးအမှားလုပ်မိရင်လည်း တောင်းပန်ဖို့ဝန်မလေးသူတျောက်ဖြစ််တယ်။သင့်အတွက်ဆို အခက်အခဲတွေကို တူတူဖြတ်ကျော်မယ့် လက်တွဲဖော်ကောင်း တျောက်ပါပဲ.။ 4ရက်နေ့မွေးသူဖြစ်ရင်… […]
တစ်ပတ်စာ ခုနှစ်ရက်သားသမီး ကံကြမ္မာဟော ကိန်း (13-7-2020 to 19-7-2020)
July 12, 2020 AlinnPya Comments Off on တစ်ပတ်စာ ခုနှစ်ရက်သားသမီး ကံကြမ္မာဟော ကိန်း (13-7-2020 to 19-7-2020)
တနင်္ဂနွေသားသမီး အစားမှားဆေးမှားဖြစ်တတ်တဲ့ကာလပါ ခေါင်းတွေလည်းမကြာခဏမူးနေတတ်ပြီးသတိမကြာခဏမေ့နေတတ်ပါတယ် ကျန်းမာရေးအထူးသတိထားရမည့်အချိန်ပါ ရေလမ်းခရီးရပ်ဝေးမထွက်ခွာသင့်ပါ ချစ်သူဘဝရက်ရှည်ကြာသူများမင်္ဂလာအမူပြုရပါလိမ့်မည် ထီရအစ၈အဆုံးထိုးပါ ယတြာ သပြေရွက်၆ရွက်ပေါ်တွင်ထိုင်၍ပုတီးစိပ်ပေးပါ တနင်္လာသားသမီး အပြောထက်အလုပ်နဲ့ပိုပြီးသက်သေပြရမယ့်ကာလပါ အလုပ်တွေဆက်တိုက်မနားမနေလုပ်ကိုင်နေရပါလိမ့်မည် အလွန်ပင်ပန်းမည့်ကာလပါ ကျန်းမာရေးတွင်သတိမကြာခဏမေ့တာမျိူးဖြစ်နေတတ်ပါတယ် ငယ်ရွယ်သူများအချစ်သစ်ထပ်ရှာချင်စိတ်တြွေဖစ်ပေါ်နေလိမ့်မည် ထီ၆အစ၅အဆုံးထိုးပါ ယတြာ ပန်းသီးတစ်လုံးတွင်နှင်းဆီပန်းစိုက်၍ဘုရားလှုဒါန်းပေးပါ အင်္ဂါသားသမီး ဒီလိုကာလတွေမှာအယူအဆမတူသူတွေနဲ့စကားများရန်ဖြစ်ရတတ်ပါတယ် မလိုအပ်ဘဲအပြိုင်အဆိုင်ပြောဆိုတာမျိူးတွေရှောင်ပါ သွားလာလှုပ်ရှားမူ့များများပြုလုပ်ပေးပါသွေးလေးပြီးမလှုပ်ချင်မကိုင်ချင်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ် ငယ်ရွယ်သူများချစ်သူထံမှလက်ဆောင်ပစ္စည်းရရှိပါလိမ့်မည် ထီ၆အစ၅အဆုံးထိုးပါ ယတြာ နှင်းဆီပန်းတစ်ပွင့်ကိုပန်းအိုးထဲထည့်၍စားပွဲခုံပေါ်တင်ထားလိုက်ပါ ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီး အောင်မြင်မူတွေထူးထူးခြားခြားရရှိပါလိမ့်မည် ပေးဆပ်မူအတွက်ရလာဘ်ကောင်းတြွေပန်လည်ရရှိလာမယ့်ကာလပါ ဒီလိုအခြေအနေတွေမှာအနိမ့်ဆုံးအနေအထားကနေရုတ်တရက်ကြီးအမြင့်မားဆုံးနေရာတစ်ခုကိုရောက်ရှိသွားပါလိမ့်မည် ဒီလိုအချိန်ကာလတွေမှာရရှိလာသောအခွင့်အရေးအပေါ်တွေဝေမနေဘဲရဲရဲဝံ့ဝံ့ဆုံးဖြတ်ရမည့်ကာလပါ သင့်အတွက်ကြိမ်းသေအောင်မြင်မည်လမ်းစများစတင်ပွင့်လန်းနေပါပြီ ကျန်းမာရေးတွင်ဒူးအဆစ်အမြစ်များနာနေပါလိမ့်မည် ငယ်ရွယ်သူများအချစ်ရေးတွင်မင်္ဂလာကိစ္စအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မူများပြုလုပ်ရပါလိမ့်မည် ထီ14ပါသောထီထိုးပါ […]
မိုးကုတ်မြို့နယ်၌ တွင်းလုပ်သားနှစ်ဦး တွင်းဟောင်းအတွင်း ပြုတ်ကျမှုဖြစ်ပွား
July 12, 2020 AlinnPya Comments Off on မိုးကုတ်မြို့နယ်၌ တွင်းလုပ်သားနှစ်ဦး တွင်းဟောင်းအတွင်း ပြုတ်ကျမှုဖြစ်ပွား
မန္တလေး ၁၂ ဇူလိုင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မိုးကုတ်မြို့နယ်၊ ပြောင်းပြင်အုပ်စု၊ ကျောက်ဆောင်ရပ်တွင် ယနေ့ မွန်းလွဲ ၃ နာရီခန့်က တွင်းလုပ်သားနှစ်ဦး ပေ ၁၅၀ ခန့်နက်သော တွင်းဟောင်းအတွင်း ပြုတ်ကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ မိုးကုတ်မြို့နယ် မီးသတ်စခန်းမှ သန္ဓေမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ ပူးပေါင်း၍ သတင်းရရှိချိန်တွင် ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ညနေ ၅ နာရီ ၃၅ မိနစ်တွင် […]
လူသေကို မကြောက် လူရှင်ကို ကြောက်သည့် အမျိုးသမီး သုဘရာဇာ မကြည်ကြည်ဝင်း
July 12, 2020 AlinnPya Comments Off on လူသေကို မကြောက် လူရှင်ကို ကြောက်သည့် အမျိုးသမီး သုဘရာဇာ မကြည်ကြည်ဝင်း
ပခုက္ကူ၏ ဇန်နဝါရီလ လယ် ဆောင်းတွင်း နေ့လယ် သည် အအေးဓာတ် ကောင်းကောင်း မပြယ်သေး။ ပခုက္ကူ-မြိုင်လမ်းမ၏ အရှေ့ဘက် မြေနီလမ်းကလေးတစ်ခု၏ အတွင်းဘက်ခပ်ကျကျတွင် သုံးမိုင်ကုန်း သုသာန်ရှိသည်။ သုသာန်သည် လူသူကင်းရှင်း၍ ကျေးငှက်သံတို့မှ တစ်ပါး အရာအားလုံး တိတ်ဆိတ်ငြိမ် သက်နေသည်။ ထိုအဝန်းအဝိုင်း ထဲတွင် သွပ်မိုးထရံကာ အိမ်ကလေး တစ်လုံး ရှိနေလေသည်။ ထိုအိမ်ကလေးတွင် မကြည်ကြည်ဝင်းတို့ မိသားစုနေထိုင်ပါသည်။မကြည်ကြည်ဝင်းတို့ အိမ် တံခါးမကြီးနှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်၊ အိမ်ကလေး၏ […]
July 12, 2020 AlinnPya Comments Off on မော်လမြိုင်ဘိုကုန်းရပ်ကွက်ရာမညလမ်းဘက်မှာလူတစ်ယောက်ဓားရှည်ကြီးကိုင်ကာသံလွင်မြစ်ထဲခုန်ဆင်းထွက်ပြေးသွား
ေမာ္လျမိဳင္ ဘိုကုန္းရပ္ကြက္ ရာမညလမ္းဘက္မွာလူတေယာက္ ေဂါက္ေၾကာင္ ပလပ္ကြ်တ္ျပီး ဓါးရွည္ႀကီးကိုင္ကာ လိုက္ရမ္းေနေၾကာင္း ေတြ႔သမ်ွလူ လိုက္ခုတ္ေနေၾကာင္း အကူအညီေတာင္းလာသျဖင္႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔အား အေၾကာင္းၾကားျပီး လာစဥ္ ထိုလူရမ္းကားမွ သံလြင္ျမစ္ထဲခုန္ဆင္းထြက္ေျပးသြား။ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔မ်ား လိုက္လံဆယ္ယူ ကယ္ဖို႔ႀကိဳးစားေပးၾကေသာ္လည္း ထိုသူမွာ ကမ္းမကပ္ပဲျမစ္ထဲမွာသာ ေရဆက္ကူးလာရာမွ ကမ္းနားလမ္းေက်က္မီးေသြးရုံးဘက္နား ျမစ္ထဲတြင္နစ္ျမဳပ္ေပ်ာက္သြားအနားကပ္ရဲရင္ကပ္ၾကည္႔ ခုတ္မယ္ဆိုျပီး ဓါးနဲ႔စိန္ေခၚေနတဲ႔လူရမ္းကားကို ျမစ္ထဲထိ ေရဆင္းကူးျပီး အနီးကပ္ေတာ႔သြားကယ္ဖို႔ ခက္ခဲပါတယ္။ အဲဒီေဂါက္က ေနာက္ဆုံးျမစ္ထဲျမဳပ္သြားတဲ႔ထိ ဓါးလုံးဝမခ်သြားတာ လူတိုင္း ျမင္ၾကမွာပါ။ မော်လမြိုင် […]
ပုသိမ်မြို့က ဘူတာညစျေးပြောင်းရွှေ့ရန် ကျပ် ၆၁ သန်းကျော်အသုံးပြုမည်
July 12, 2020 AlinnPya Comments Off on ပုသိမ်မြို့က ဘူတာညစျေးပြောင်းရွှေ့ရန် ကျပ် ၆၁ သန်းကျော်အသုံးပြုမည်
ဧရာဝတီတိုင်း၊ ပုသိမ်မြို့က ဘူတာညစျေးအား ပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်ဖို့ တိုင်းဒေသကြီး အထွေထွေပိုလျှံရန်ပုံငွေကနေ ကျပ်သန်း ၆၁ ကျော် အသုံးပြုမယ်လို့ စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီး ဦးကျော်မြင့်က ပြောပါတယ်။ “ပျံကျစျေးကို ရေရှည် အများပြည်သူသွားလာတဲ့ လမ်းပေါ်လည်း ထိခိုက်မှုမရှိအောင် သွားရေးလာရေးကိုလည်း မထိခိုက်အောင် စျေးသည်တွေလည်း လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ စနစ်တကျ သူတို့ရောင်းချင်တဲ့အချိန်အထိ ရောင်းလို့ရအောင်ဆိုပြီး နေရာရှာပါတယ်။ ရေကြည်မင်္ဂလာကျောင်းအနားက မီးရထားမြေမှာလည်း အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ သင့်တော်မယ်ဆိုတဲ့ အသင့်တော်ဆုံးနေရာကို တွေ့ပါတယ်။” ရေကြည်မင်္ဂလာကျောင်းအနားက မီးရထားမြေကို ငှားရမ်းပြီး […]
မင်းသားတစ်ယောက်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာတွေကျဆင်းအောင် တိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့ဇေရဲထက်
July 12, 2020 AlinnPya Comments Off on မင်းသားတစ်ယောက်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာတွေကျဆင်းအောင် တိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့ဇေရဲထက်
မင်းသားတစ်ယောက်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာတွေကျဆင်းအောင် တိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့ ဇေရဲထက် လူ့ဘဝဆိုတာ ဒီလိုပါပဲအကိုရာ…။ ဘဝခရီးလမ်းကိုလျှောက်တဲ့ အချိန်မှာ မနာလိုသူတွေရဲ့ ဝေဖန်တိုက်ခိုက် ထိုးနှက်မှုကိုတော့ ခံကြရစမြဲပါ။ ပိုဆိုးတာက ကိုယ့်အပေါ်မနာလို မုန်းတီးနေတဲ့သူတွေက သူစိမ်းမဟုတ်ပဲ ဆွေမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တာ သဘာဝလိုကို ဖြစ်နေတာပါဗျာ။ ဆရာလုပ်တာတော့မဟုတ်ပါဖူးဗျာ။ အကြံပေးတာပါ။ အကိုက အောင်မြင်နေတဲ့ မင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်နေပီဆိုတော့ အဲ့လိုလူတွေကို ရှောင်နိုင်ဖို့လိုတယ်ဗျ။ သူတို့ဘာပြောနေနေ မမြင်ချင်ယောင် မသိချင်ယောင်ဆောင်နေတာက ကိုယ့်သိက္ခာလဲ မကျတော့ဖူး။ နေရာတိုင်း လိုက်ဖြေရှင်းလေ ပိုရှုပ်လေ ဖြစ်လာမှာပဲဗျ။ […]
ဇေရဲထက်ရဲ့အဖွား မဆုံးသေးပါဖူး အလတ်ကြီးရှိပါသေးတယ်တဲ့ဗျာ
July 12, 2020 AlinnPya Comments Off on ဇေရဲထက်ရဲ့အဖွား မဆုံးသေးပါဖူး အလတ်ကြီးရှိပါသေးတယ်တဲ့ဗျာ
ဇေရဲထက်ရဲ့အဖွား မဆုံးသေးပါဖူး အလတ်ကြီးရှိပါသေးတယ်တဲ့ဗျာ(ရုပ်သံ) ဇေရဲထက်ရဲ့အဖွား မဆုံးသေးပါဖူး အလတ်ကြီးရှိပါသေးတယ်တဲ့ဗျာ မင်းသား ဇေရဲထက်အဖွားမဆုံးပါဘူးဗျာ အကောင်းကြီးပါ အဖွားကမင်းသားဇေရဲထက်နဲ့ ရုပ်တော်တော်တူလို့ မြေးဖွားနှစ်ယောက် ပြန်လည်ဆုံစည်းပါစေဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့တင်ပေးတာပါ တခြားဘာစိတ်မှမရှိပါဗျာ မင်းသားကသံယောဇဉ်မရှိဘူးဆိုတာ သိရတော့လည်း စိတ်မကောင်းပါဘူး မယုံမှာဆိုးလို့Videoရိုက်တင်ပေးလိုက်တယ် ဟန်ငြိမ်းဦး အောက်ကစာကတော့ ဇေရဲထက်တင်ထားပါ အဖေ့ဘက်က အဘွားဆုံးပြီတဲ့လား ကောင်းပါတယ် အဘွားလည်းဝဠ်ကျွတ်တာပေါ့ ကျတော်လည်း သူများပြောခံရမယ် အဖေဆုံးတော့ လည်းမငိုဘူး ဘာကြောင့်လည်း????? အမေ့ဘက်ကအဘွားဆုံးတော့လည်း အခုဝမ်းနည်းမူ့မဖြစ်ဘူး ဘာကြောင့်လည်း ???? […]
ရဲအချုပ်ကားပေါ်ကနေ ထွက်ပြေးဖို့ ကြိုးစားတဲ့ မူးယစ်ဂိုဏ်းခေါင်းဆောင်၊ အသေပစ်သတ်ခံရ
July 12, 2020 AlinnPya Comments Off on ရဲအချုပ်ကားပေါ်ကနေ ထွက်ပြေးဖို့ ကြိုးစားတဲ့ မူးယစ်ဂိုဏ်းခေါင်းဆောင်၊ အသေပစ်သတ်ခံရ
ရဲအခ်ဳပ္ကားေပၚကေန ထြက္ေျပးဖုိ႔ ႀကိဳးစားတဲ့ မူးယစ္ဂုိဏ္းေခါင္းေဆာင္၊ အေသပစ္သတ္ခံရ တိုက်ပွဲငယ်တစ်ခုမှာ ရဲ(၈)ဦးကို AK47 နဲ့ ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်ခဲ့သူ အိန္ဒိယနာမည်ကျော် မူးယစ်ဂိုဏ်းခေါင်းဆောင်ကို ရဲက အသေပစ်ခတ် နှိမ်နင်းခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ ဂိုဏ်းခေါင်းဆောင်အမည်ကတော့ Vikas Dubey ဖြစ်ပြီး၊ Madhya Pradesh မှာ ဇူလိုင်(၉)ရက်က အဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ရာနဲ့ချီဟာ လက်မရွံ့ဂိုဏ်းခေါင်းဆောင် Vikas ကို ဖမ်းဆီးနိုင်ရေး ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပါတယ်။ သူ့ကို အသက်ရှင်လျှက် ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့သော်လည်း […]